Fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch, rahampitso handihizan'ny rehetra | Vaovao IPhone
Apple dia tsy nandefa fanamby vaovao ho an'ny mpampiasa Apple Watch efa ela. Amin'ity indray mitoraka ity dia fanamby mahafinaritra kokoa izay itiavan'ny orinasa hankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny dihy ka azonao vinavina Resaka dihy no resahina!
Ho an'ireo izay te-hanatanteraka an'ity karazana fanamby apetrak'i Apple ity indraindray ny alakamisy 29 aprily ho avy izao, izany hoe rahampitso, ankalazana ny Andro Iraisam-pirenena momba ny dihy Ka handresena ny fanamby, ny sisa ataonao dia ny mandihiza mandritra ny 20 minitra ary mirakitra ny hetsika ao amin'ny Apple Watch anao.
Vonona ny fanamby amin'ny dihy amin'ny 29 aprily ho avy izao
Tsara hatrany fa mandefa fanamby vaovao i Apple nanomboka tamin'ity tranga ity Tsy mbola nanana fanamby tamin'ny dihy tao amin'ny Apple Watch izahay hatrizay. Betsaka ny mpampiasa izay mankafy be an'io fanamby io ary manantena izahay fa hanohy hitombo hatrany hatrany i Apple rehefa mandeha ny fotoana. Raha mahomby ianao, dia hahazo fahasalamana, dihy ary fahafinaretana fatra tsara ho fanampin'ny sticker.
Araka ny voalazantsika, ny fanamby dia ny fandihizana sy ny fahazoana ny loka tokony hananantsika fenoy ny fampihetseham-pandihizana mandritra ny 20 minitra na mihoatra. Raha ny tenako manokana dia tsy dia mandihy loatra aho ary na dia tsy tiako aza ny manambaka amin'io lafiny io, noho io fanamby amin'ny dihy io ary tsy misy mahalala fa hanao fiofanana mahazatra aho ary isaiko ho toy ny dihy izany ... fa shhhht!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch, rahampitso mandihy daholo